A na-etinye ntụrụndụ aka na ọdụ ụgbọ oloko na Ankara | RayHaber | raillynews
[31 / 03 / 2020] Minista ime ime obodo Soylu 'E kewapụrụ iche maka ọha na eze 95% nke Ndụ Kaara n'ụlọ'	03 Afyonkarahisar
[31 / 03 / 2020] 62 6 ọzọ a ga-eme ụlọ ọrụ 219 Ọha ga-eme ya	06 Ankara
[31 / 03 / 2020] 30.03.2020 Akụkọ Coronavirus: Anyị Echefuru 168 Ọrịa	coronavirus
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraA na-etinye ntụpọ aka
20 / 03 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Gondola, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Metro, Turkey, TELPHER
A na-etinye aka nchacha aka na ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Ankara
N'ime oke nke usoro a na-emegide coronavirus nke Ankara Obodo ukwu, igwe na-ere ihe nhicha aka bidoro idowe na Mọnk, ANKARAY na Cable Car Stations. A ga-etinye ndị na-ahụ maka ọgwụ na-enwe ihe mmetụta dị na 100 na ntinye anya na ntinye n'ime illọ Rail Systems, nke ụmụ amaala na-eji ya nke ukwuu site na ntụziaka nke Ankara Metropolitan Mayor Mansur Yavaş.
Obodo Ankara na-aga n'ihu na ọgụ ya na-alụ ọgụ megide coronavirus (COVİD-19).
Na-ebute ahụike ọha, Mịnịstrị obodo gbakwụnyere ihe ọhụrụ na mgbochi na usoro a na-ewere na isi obodo City megide ihe egwu nke ọrịa na nje. Site na nkuzi nke Onye Isi Obodo Mịnịsta Mansur Yavaş, igwe ịpịcha ihe na - ahụ ihe nkedo ahụ malitere ịtinye na Metro, ANKARAY na Cable Car Stations.
A ga-etinye ya ihe ruru otu narị ihe puku abụọ ga-etinye na usoro ihe omume
Igwe na-ere ihe na-enye ihe mmetụta, nke etinyere n’ime ọdụ ANKARAY na Metro na Kızılay, n’oge na-adịghị anya, ga-edobe ya na 43 isi na ngụkọta nke 11 Metro, 4 ANKARARAY na 100 Cable Car Stations na Isi Obodo.
N'okpuru, a ga-enyocha akụrụngwa na-ere ihe na-ere mgbe ụfọdụ, ọ nyere ozi ndị a:
“N'ikwekọ na mkpebi nke risislọ Ọrụ Ahụ Ike Ọchịchị mebere site na ntuziaka nke Onye Isi Obodo Obodo Ankara Mr. Maazị Mansur Yavaş, anyị ga-edobe ihe ndị na-egbochi ndị mmadụ na ebe isi ihe dị na ọdụ anyị iji kpuchido ahụike nke ụmụ amaala anyị nke na-eji usoro ụgbọ okporo ígwè eme njem na njem ọha. Anyị bidoro ọmụmụ ihe anyị n’isiokwu a. A ga-arụcha usoro mgbakọ na ọdụ anyị niile ozugbo enwere ike. Ndị njem anyị nwere ike ịga njem site na hichapụ aka ha n'efu.
AKW SKWỌ AKW SKWỌ AKW SKWỌ AKW WITHKWỌ AKW WITHKWỌ AK SKỌ
Eyyüp Dereli, onye na-eche na igwe na-ere ihe na-adịghị ọcha etinyebere na Metro Stations maka ịdị ọcha aka bụ ntinye aka, kwuru, “Ọ ga-amasị m ikele Onye Isi Obodo anyị Nnukwu Mansur Yavaş maka ime ihe ndị a. Ngwa mara mma nke ukwuu. Anyị ga-enye azụ, anyị ga-agba mbọ iwepụ ọrịa a. Ọ bụrụ na anyị eburu ụzọ ndị a, anyị ga-emeri ụbọchị ndị a nanị n'obodo ”.
Ọ bụ ezie na ọrụ mkpocha na nhicha ahụ na-aga n'ihu na Stgbọ Mmiri Metro, ụmụ amaala na-eji ụgbọ njem ọha na-ekwupụta echiche ndị a banyere ọrụ ndị isi obodo ukwu na-ahụ maka ahụike ọha na okwu ndị a:
Yeliz İşitmir: “Sanitizer aka bụ ezigbo echiche. Iji ọgwụ ndị e ji eme ihe nwere ike ịkasi anyị obi. Achọrọ m ka ngwa a zuru ebe niile maka ndị njem na-eji ọdụ ụgbọ oloko. ”
Murat Erdoğan: “Ọ bụ ngwa dị oke mkpa na ahụike. Ọ bụ ihe dị mkpa ịnweta ọgwụ ndị a na - egbochi ihe ọhaneze na ebe ndị mmadụ na - ezighi ezi. O kwesịkwara ịdị n’ụlọ anyị. Ọ dị mma maka obodo anyị ịrụ ọrụ a. Ekele dịrị ndị nyere onyinye. ”
Günel Nasibova: "Ọ ga-amasị anyị ịkele obodo Ankara Metropolitan maka ịtụle ahụike anyị yana itinye ụdị ngwa a."
Kamuran Baykal: “Anyị nwere obi ụtọ maka ndị obodo ukwu. Nke a bụ ngwa dị oke mma na ezigbo ọrụ. Ọ dịkarịa ala, ndị mmadụ nwere ike ịgbanye aka ha ma kwọrọ na-enweghị nje ọ bụla. ”
A na-etinye Ngalaba Emechibidoro na Distrikti Diyarbakir
A na-arụ ụkwụ ụkwụ nke Golden Horn metro!
Gaziantep BB Rail Sistem Nrụpụta ụgbọ okporo ígwè dị ọhụrụ na agba nke atọ…
Gaziantep Rail System Project Rail sistem
Gailantep Metropolitan Municipal Rail System Project Rail system project and…
Mmetụta nke okporo ígwè okporo ígwè: Nzukọ Nlekọta okporo ígwè nke Britain nke 2013
A ga-ekesara 1000 enyemaka Lira nye ndị nọ na mkpa
Ntị Istanbulites ..! Na-egbochi ationgbọ njem Ọha
Taa na History: 1 April 1972 Sleeper service
Nkwupụta ọmịiko: A ga-eme eriri Sakarya Nostalgic Tram Line (Kagbuo Obi Ọgba)